မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ: တံခါးခေါက်တာ ဘယ်သူလဲ
သူငယ်ချင်းမိသားစုကတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီး မျက်စိမျက်နှာတွေ ပျက်နေကြတယ်၊ သူငယ်ချင်းရော၊ အမေကြီးရောက မမြင်ရတဲ့ လောကသားတွေကို အရမ်းကြောက်တတ်တယ်လေ။ အဲ့ဒီမှာပဲ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘာစကားမှမပြောမိပဲ အချိန်အတော်လေးကြာသွားတယ်၊ ဒီမှာ အမေကြီးက ဆက်မနေရဲတော့ပဲ ထမင်းမစားတော့ဘူး၊ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး လုပ်ပါလေရော၊ ဒါနဲ့အမေကြီးကို နားကြားမှားတာနေမှာပါ၊ ဘဲလ်မြည်တာကလည်း ရှော့ခ် ဖြစ်တာနေမှာပါလို့ပြောရပေမယ့် ဒါတကယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိနေကြပါတယ်။
နောက် နာရီဝက်လောက်နေတော့ နောက်သူငယ်ချင်းဇနီးမောင်နှံရောက်လာတယ်..။ မိုးတွေသည်းနေလို့ နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောရင်း ထမင်းစားကြတာပေါ့။ အမေကြီးကတော့ ထမင်းတောင်ကျွေးလို့ မရတော့ပါဘူး..၊ ပြန်ဖို့ကိုပဲ တစ်ပြင်ပြင်လုပ်နေတယ်။ နောက် ထမင်းစားပြီးတော့ အဲ့ဒီအကြောင်းကို နောက်သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတော့ သူကလည်း လန့်နေတယ်၊ နင်နေရဲ ရဲ့လား..ဘာညာနဲ့ စိုးရိမ်ကြတာပေါ့။ နေရဲရဲ မနေရဲရဲ နေရမှာပဲလေ၊ ဒီလိုနဲ့ ထမင်းစားပြီးလို့ ကော်ဖီသောက်ပြီးတော့ သူတို့လည်းပြန်သွားကြတယ်၊ မမလည်း အဲ့ဒီညကတော့ စောစောပဲ အိပ်ရာ ဝင်ခဲ့တာပေါ့။ အမေကြီးကတော့ အဲဒီအိမ်ကနေပြောင်းခဲ့တဲ့ အထိ နောက်ကို ဘယ်တော့မှ မလာလည်တော့ပါဘူး..။
နောက်တစ်ခါကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါပဲ။ အဲ့ဒီအိမ်မှာပါပဲ။ ညဘက်စကားပြောရင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ နဲနဲညဥ့်နက်သွားတယ်။ သူကလည်း သူ့အတွက် ပြင်ပေးထားတဲ့အခန်းထဲမှာ ၀င်အိပ်တာပေါ့။ နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာတော့ သူ့ကို အစောကြီးပဲ ထမင်းစားခန်းထဲမှာထိုင်နေတာတွေ့လိုက်တယ်။ “အမ..အိပ်မပျော်ဘူးလား” လို့မေးတော့ “တစ်ညလုံးကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူး”တဲ့..။ သူအိပ်ပျော်သလိုလိုရှိရင် ကုတင်ကို တစ်ယောက်ယောက်က လာလှုပ်ရင်း၊ မျက်နှာကို တစ်ယောက်ယောက်ကလာထိသလိုနဲ့ ဖြစ်နေတာဆိုပဲ။ နောက်တော့ သူလည်း အမျှအတန်းဝေပြီးစည်းချပြီးအိပ်မှာပဲ အိပ်လို့ရတော့တယ်တဲ့။
အဲ့ဒီအမ ကတော့ သိပ်ပြီးမကြောက်တတ်လို့တော်ပါသေးရဲ့၊ သူကတော့ မမ အဲ့ဒီအိမ်ကနေ မပြောင်းခင် အထိ မကြာခဏလာလည်တတ်ပြီး ရက်ရှည်နေထိုင်လေ့ရှိပါတယ်။
ကဲ..။ တံခါးလာခေါက်ပြီ ခေါ်တဲ့သူနဲ့ အိပ်ရာက လာနှိုးတဲ့သူဟာ ဘယ်သူလို့များ ထင်ပါသလဲရှင်..။
ဘူလေးလဲ အဲဒါ ဘူလေးလဲ
အစ်မ သတ္တိကောင်းတယ်နော်... ကျွန်တော်ဆိုရင် မနေရဲတော့ဘူး...
ကျွန်တော်တော့ အဲလိုကြီးဆို နေရဲပါဘူး မမ၀သုန်ရယ်။ ကြောက်စရာကြီးနေမှာ။ ဟီး......သတ္တိက အဲလိုကောင်းတာ။ ဗန္ဓုလနဲ့ ဆွေမျိ်ုးတော်တယ်လေ။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်အနောက်မှာလည်း တစ်ယောက်ယောက်များ ရှိနေမလားလို့ ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ...:)
အဲလိုအိမ်မျိုးမှာ နေဖူးတယ်...။ ခုလက်ရှိလဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာလေ မမ၀သုန်ရောက်ဖူးပါတယ်..။
Good Writing because you can create your story that was really happen as per their comment. Ha Ha ---- Good creation. I believe if this was really happen --------
မမဝသုန်တို့ များ သတ္တိကောင်းပါ့..တို့ များဆို အန်တီကြီးလို တခါတည်း ပြေးမှာ သေချာတယ်